> Lacagta iyo dhaqaalaha > Miisaaniyadda ama bajedka
Mushaharka lagu qaato Swiiska waa ka sareyaa kuwa wadamada kale badankooda. Laakiin isla markaas, nolosha Swiiska iyo badeecadu waa qaali. Waxa aad u sareya ijaarka guryaha, kharajka caymisyada lagu bixiyo, kan xarumaha caafimaadka, cashuur-cashuuraada sanad kasta la saar shaqaalaha aad ayey u sareyaan.
Dadka ku cusub Swiiska waxa lagu la talinayaa in ay si faafaahsan u qorsheyaan miisaaniyaddooda oo ay waxa soo gelaya iyo waxa ka baxaya isu dheelitiraan is ayan dhiaato ula kulmin.
Qoysaska dhaqaalahoodu hooseyo, waa in ay weydiistaan talo iyo kaalmo si maciishadda iyo wax soo gelaya isugu dheelitiraa oo a isku fileysiiyaan waxa soo gelaya
Waxa qofka soo gelaya ah aasaaska u ah miisaaniyadda waa mushaharka uu qaato.
Ijaarka guryaha Swiiska aad ayey qaali yihiin. Waa in inta aad ijaarka ku bixisaa ayan ka badeyn 25% mushaharkaaga am waa ku soo gelaya. Haddii waxa ku soo gelayaa ay hooseyso, waa in inta aad ku bixisaa ijaarku ka badnaan 20%.
Kharajka ku baxa caymisyada aafimaadku aad buu u sareyaa. Marka is garabdhig caymisyada oo kan jaban isku qor.
Meel kasta Swiiska waa ka jira xarumo aa xafiisyo dadka kala taliya oo ka caawina sidi ay u qorsheyn lahaayeen miisaaniyaddooda. Talooyinka lagu siinayaa waa lacaglaaan. Waxa lagaa rabaa in aad buuxiso foomam ka tarjumaya waxa ku soo gala, kharajka kaa baa iyo hantida aad leedahay. Waa lagaa caawinayaa sida loo buuxsho foomamka.
Cinwaanada xarumaha dadka kala taliya bajadka ama miisaaniyadda
Foomamka ku qoran af jarmalka
Foomamka ku qoran afka farasiiska
Wixi intaa dhaafsan kala xirir shabakadaha Swiiska ee xarumaha ee talobixiska bajadka
Cinwaanka xarumaha talobixinta miisaaniyadda ama bajedka